आफ्नो श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले युवतीको यौ, ना,ङ्गमा खुर्सानी दलिदिइन् ! – Ujyaalo Patrika
आफ्नो श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले युवतीको यौ, ना,ङ्गमा खुर्सानी दलिदिइन् !
आफ्ना श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै एक महिलाले ती युवतीमको यौ,ना,ङ्गमा खुर्सानीक दलिदिएकी छन्। यो खबर भारतको अहमदाबादको हो। आफ्ना श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै ती महिलाले थप २ महिलाको सहयोग लिएर २२ वर्षीया युवतीको यौ,ना,ङ्गमा खुर्सानीको पाउडर दलेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
खबर अनुसार ती युवती उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगेकी छन्। ती युवतीले आफू अहमदाबादको नारानपुरा क्षेत्रमा रहेको एउटा कपडा पसलमा काम गर्ने गरेको र गिरीश गोस्वामी नामक व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढेको बताएकी छन्। ती युवती र पुरुषबीच २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेकोमा पुरुषले सम्बन्ध अन्त्य गरिदिए।
युवतीले बताए अनुसार गिरीश गोस्वामीले दुई महिना अघि उनलाई भेट्न बोलाएका थिए। तर, यो खबर ती पुरुषकी पत्नीले समेत थाहा पाइन्। र, आफ्ना श्रीमानकी प्रेमिकामाथि रिस पोख्न साथीहरुसँग मिलेर अ,प,ह,र,ण समेत गरिन्। एक सुनसान कोठामा लगेर आफ्ना सबै लुगा खोलेको र यौ,ना,ङ्गमा खुर्सानीको पाडर भरेको ती युवतीले प्रहरी समक्ष बताएकी छन्।
अहमदाबादका प्रहरी निरीक्षक जेए राठवाका अनुसार युवतीको उ,जुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ। र, ती पुरुषकी श्रीमतिसहित ३ महिलालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। –एजेन्सी
Previous एउटा यस्तो गाउँ जुन गाउँ पुरै जमिन मुनि नै बस्ती बनाएर बसोबास गरेका छन् ! जस्को आफ्नै जमिनमुनि संसार छ (फोटो फिचरसहित)
Next रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि ठुलो नशा इन्टरनेटको ! – रक्सी र ‘यौ’, न भन्दा पनि महत्वपुर्ण वाईफाई